Shiinaha 120*60*150 CM Warshada iyo alaab-qeybiyeyaasha | Virex
Virex hydroponics aqalka dhirta lagu koriyo koraan teendho sare oo milicsi mylar biyuhu aan oxford qolka gudaha gudaha
Alaabta qaaliga ah:VIREX kora qaababka teendhada 600D shiraac hawl culus leh, dahaarka mylar oo aad u milicsanaya iyo jir bir ah oo adag; Waa biyo-celin, iftiin-celin, horayna loogu qalabeeyay soo saarista iyo hawo-qaadista; taas oo ka dhigaysa mid ku habboon wax kasta oo koraan guud.
Dhisme Xoog Leh: Jirka birta ah waxaa lagu sameeyay tuubooyinka u adkaysta miridhku-culus iyo geesaha qufulka; Wax qalab ah oo loo baahan yahay ma jiro.
Xakamaynta Iftiinka ugu badan: Daahan mylar waa mid aad u milicsan, la dhaqi karo, oo aan sun ahayn; waxay ka hortagtaa iftiinka nidaamka inuu ka baxo, hubi in dhirtaadu isticmaasho dhammaan iftiinka nidaamka; waxay sidoo kale xannibaysaa iftiinka ambient in uu soo galo, hubi in dhirtaada aan la fasirin inta lagu jiro wareegga madow.
Naqshada socodka Hawada: Teendhada waxaa ku jira sharaabaadyo labajibbaaran oo labajibbaaran oo leh xargo si ay u daboolaan baahiyaha hawo ee kala duwan, laba dalool oo dheeraad ah oo gudaha ku dhex jira ayaa lagu daboolay shabag jajaban oo loogu talagalay socodka hawada dabiiciga ah ee dheeraadka ah.
Ku habboonaanta: Albaabka dabada leh oo leh siib-siikad hawl culus leh oo si habsami leh u fur, oo si fudud u gelaysa teendhada; Daaqadda fiirsashada ee daboolka Velcro waxay u oggolaaneysaa in si sahlan loo hubiyo dhirtaada iyada oo aan waxyeello u geysan cimilada gudaha.
1.Material: 600 D oxford dhar iyo 95% mylar milicsiga.
3.Feature: Xidhiidhiyaha ABS, Hawo hawada, daaqadaha hawo, Suunka, saxaarad dabaqa.
120*60*150cm(Xajmiga la habeeyey)
Midabka Madow/ Cadaan/Gray/Cabsimi
Qalab 600D oxford maro iyo mylar milicsiga sare.
Logo La habeeyay
3.Waxaan kuu ballan qaadaynaa inaad ku siiso jawaab celin 24 saacadood oo aad xal u hesho 48 saacadood ee soo socda.
Q1: Waa maxay MOQ?
A: Sida caadiga ah MOQ waa 50 pcs, fadlan la xiriir iibka haddii aan haysanno kayd.
Q2: Ma isticmaali karnaa wakiilkayaga maraakiibta?
J: Haa. Waxaan la shaqaynay dad badan oo wax soo gudbiya. Haddii aad u baahato, waxaanu kugula talin karnaa qaar oo waxaad barbar dhigi kartaa qiimaha iyo adeegyada
Q3: Sideen ku heli karaa liiskaaga iyo liiska qiimaha?
A: Fadlan noo soo dir emailkaaga ama faakiska si aad u hesho macluumaadka buug-yaraha iyo liiska qiimaha.
Hore: 1/8 " Xadhig Ratchet Hanger Tayada Sare leh Lammaanaha Hanger
Xiga: 300*300*200 CM Sanduuqa Teendhada Koritaanka Waara ee Qoraaga Oxford Mylar
Teendhada koritaanka Hydroponic 600 D Oxford In ka badan 95% Ref...
Kori Teendhada Beerta Gudaha ee Tayada Sare 120*...
80*80*160 CM Kori Teendhada Hydroponics Gard Gudaha...